အခြေပြုကျမ်းများ | The Tears of Jesus | Real Conversion
၁၀၁၂၊ ခုနှစ်၊မတ်လ၁၁ရက်၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ ညနေပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလ၊သေခြင်းမှကယ်လွှတ်နိုင် တော်မူသောသူကို ကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆု တောင်းပဌနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)။
ကနေ့ည ကျွန်ုပ်၏ဒေသနာတော်ခေါင်းစဉ်သည် “ယေရှု၏မျက်ရည်” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ဤလောက၌ “သက်ရှိထင်ရှားစဉ်” ယေရှုဘုရားသည် “ဝမ်းနည်းကြေကွဲ လျှက်”ဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့သည်ဟု မိန့်တော်မူပါသည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယမိန့်တော်မူ သည်မှာ၊ သူသည် “ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြည်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သောသူဖြစ်၏”ဟူ၍ (ဟေရှာယ၅၃း၃)၌ မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က၊ ယေရှုသည်ဤလောက၌ အသက်ရှင်စဉ်အကြိမ်များစွာငိုကြွေးခဲ့သည်ကို ဖေါ်ပြပေးပါသည်။
(၁၈၃၈-၁၈၇၆ ဖိလစ်ပလစ် သီကုံးသော “ဟာလေလုယာ ကယ်တင်ရှင်”)
ငြိုငြင်ခံရသူ၊ ယေရှေုသည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဝမ်းနည်းကြွေကွဲလျှက်ငိုကြွေးခဲ့ပါ သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ သနားကြင်နာစွာဖြင့် သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ငိုကြွေးခဲ့ သည်ကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
၁။ ပထမ၊ လာဇရု၏သင်္ချိုင်း၌ ယေရှုငိုကြွေးခဲ့ခြင်း။
ယေရှုသည် သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်သောလာဇရုနေထိုင်ရာ ဗေသနိရွာသို့သွားရောက်ခဲ့ပါ သည်။ လာဇာရုကို မြေမြှပ်သဂြိလ်ပြီးသည်မှာ လေးရက်ပင်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ သေဆုံး သွားပြီဖြစ်သော သူ၏ညီမသည်ယေရှုကိုသွားပြီးခရီးဦးကြိုခဲ့ပါသည်။ “မာရိမှစ၍လိုက် လာသောယုဒလူတို့သည် ငိုကြွေးကြသည်ကို ယေရှုသည်မြင်တော်မူသောအခါ၊ အလွန် ငြိုးငယ်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်းခြင်းရှိ၍၊ အလောင်းကိုဘယ်မှာထားကြသနည်းဟု မေးတော်မူ လျှင်၊ သခင်ကြွ၍ကြည့်တော်မူပါဟုလျှောက်ကြ၏၊ ယေရှေုသည်မျက်ရည်ကျတော်မူ၏၊ ယုဒလူတို့က၊ ကြည့်ပါ၊ လာဇရုကိုအလွန်ချစ်တော်မူပါသည်တကားဟု ဆိုကြ၏” (ယောဟန် ၁၁း၃၃-၃၆)။
ယေရှုသည်၊ လာဇရုကိုသေခြင်းမှပြန်ရှင်စေနိုင်သည်ကို သိပါလျှက်နှင့်မာရိတို့နှင့် အတူငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
-အဘယ်ကြောင့်ယေရှုငိုကြွေးခဲ့ပါသနည်း? မကြာမှီမိနစ်အတွင်းလာဇရုကိုပြန် ရှင်စေမည်ကိုသိပါလျှက်မာရိ၊ မာသအပေါင်းအပါတို့နှင့်အတူ ငိုကြွေးခဲ့ပါ သည်။ သူသည်နှလုံးသားကြေကွဲသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။ lသည် သားသမီးသေဆုံးသွားသော dခင်တိုင်းတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခဲ့သည်။ သူသည် သေဆုံးသွားသော ဇနီး၏အလောင်းနား၌ ရပ်နေသောခင်ပွန်းသည်တို့နှင့်အ တူငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။ သူသည်အပျော်ပါးလိုက်စား၍ ငွေဖြန်းတီးသောသား တို့နှင့်ထိန်းရခတ်သော သမီးတို့အဖို့ငိုကြွေးနေသော မိခင်၊ဖခင်တို့နှင့်အတူ ငိုကြွေးနေပါသည်။ သူ၏စီးကျသောမျက်ရည်သည် ကျွန်ုပ်နှင့်သင့်အတွက်စီး ကျခြင်းဖြစ်သည်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲနေနှလုံးသားတိုင်းတို့အတွက် သူ၏ မျက် ရည်စီးကျနေသည်၊ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အခက်အခဲအတားအဆီးနေရာ၌ အစားဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ကြေကွဲဝမ်းနည်းခြင်းအထဲသို့ ယေရှုသည်ဝင်ရောက်ငို ကြွေးနေပါသည်။ (The Son of God, Sword of the Lord, 1976, p.233).
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က “ဝမ်းမြောက်သောသူတို့နှင့်အတူ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကို၎င်း၊ ငို ကြွေးသောသူတို့နှင့်အတူငိုကြွေးခြင်းကို၎င်း၊ ပြုကြလော့” (ရောမ၁၂း၁၅)။ ဒေါက်တာ ရိုက်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ “ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်စေသောအမှုအရာထက် သေးငယ်သော ယေရှုဘုရား၏လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားနားမလည်းနိုင်ပါ”ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းနည်းငိုကြွေးသည့်အခါတိုင်း ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ငိုကြွေး ခြင်းသည်အမှန်ပင်ဖြစ်၏။ ယေရှုသည်အပြစ်သားတို့အဖို့ ကြိမ်ဖန်များစွာငိုကြွေးခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်က ယေရှု၏ “သနားခြင်းဂရုဏာတော်” အစဉ်ဖေါ်ပြထားပါ သည်။ ယေရှုဘုရား၏ စီးကျသောမျက်ရည်သည် သူ့အတွင်းနှလုံးသားထဲက ဝမ်းနည်း ခြင်း၊ သနားခြင်းဂရုဏာတော်ကို ပြသခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ (Rice, ibid).
ကျွန်ုပ်အသက်၁၅နှစ်အရွယ်တွင် ကျွန်ုပ်၏အဘွားသေဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ အဘွားကို မည်မျှချစ်သိကိုအတိုင်းမသိပါ! အဘွားသေဆုံးသောအခါ ကျွန်ုပ်သည်အ ဘွား၏မီးဖိုချောင်ထဲသွားပြီး စပျစ်ဝိုင်ကိုယူလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုစပျစ်ဝိုင်ကို၅၆ နှစ်တိုင်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပါသည်။ ဘယ်နေရာကိုဘဲသွားသွား ထိုပစ္စည်းကို ကျွန်ုပ်ယူ သွားခဲ့သည်။ အခုဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်စား၌တင်ထားပါသည်။ ထိုပစ္စည်းကိုကြည့် ပြီးဤတရားဒေသနာတော်ကို ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တော် “အမေ” ကိုကတိ ပေးခဲ့တယ်၊ ထိုစပျစ်ဝိုင်ကို ကျွန်ပ်အသက်ရှင်နေသရွေ့ ကျွန်ုပ်အားသတိပေးစရာအဖြစ် တစ်သက်ထိန်းသိမ်းပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တော်အဘွားကိုအရမ်းချစ်ပါ တယ်!
အဘွားသေဆုံးသောညတွင် ကျွန်ုပ်တော်အိပ်မပျော်ပါ၊ အဘွား၏ကုတင်ဆီသို့သွား ရောက်ပြီး ကလေးငယ်ပမာအဘွား၏ ရင်ဘက်သို့ခေါင်းကိုတို့ဝှေ့ကာ၊ သက်ရှုသံကိုနား ထောင်ခဲ့၏။ မကြာမှီတွင် ကျွန်ုပ်အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တော်အဘွားကို အရမ်း ချစ်ခဲ့ပါတယ်!
အဘွား၏သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူအနားရပ်၍ ကျွန်ုပ်ငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ရင်ထဲ၌အဘွား ကိုလွမ်းခြင်းကပြက်ပြယ်မသွားပါ။ သင်္ချိင်းကုန်းသို့ပေးပြေးလွှားခဲ့၏။ သင်္ချိုင်းကုန်းသို့ မကြာခဏပြေးလွှားသွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ သင်္ချိုင်းကုန်းမြေပေါ် လှဲလှောင်းပြီးငိုးကြွေးခဲ့ သည်။ ထိုစဉ်တွင် တော်ထဲ၌ယာကုပ်ထံ ဘုရားသခင်ထင်ရှားသည်အလား၊ ကျွန်ုပ်ဆီသို့ လည်း ဘုရားသခင်ဆင်းသက်လာခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်ကျွန်ုပ်လည်း “စင်စစ်ထာ၀ရဘုရား သည် ဤအရပ်၌ရှိတော်မူ၏၊ ရှိတော်မူကြောင်းကိုငါမသိ” (ကမ္ဘာ ၂၈း၁၆)။
အို၊ ယေရှုလည်းလာဇရု၏ သင်္ချိုင်းကုန်း၌ငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။ ယနေ့ညသင်အဖို့လည်း ငိုကြွေးနေသည်! ယေရှုသည်သင်၏ ဝမ်နည်းခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့မှုကိုနားလည်ပါသည်! သင်တို့အား နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြင့် ဖိတ်ခေါ်လိုသည်မှာ- တောင်းဆိုလိုသည်မှာ-သင့်ကို ထာ၀ရမေတ္တာတော်နှင့် ချစ်တော်မူသော သခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ!
“ယေရှုသည် မျက်ရည်ကျတော်မူ၏” (ယောဟန်၁၁း၃၅)။
သမ္မာကျမ်းစာတော်မြတ်၌ ယေရှုပြုံးရယ်တော်မူခြင်းကို ဖေါ်ပြမထားပါဘဲ၊ မကြာခဏငိုကြွေးခြင်းကိုသာဖေါ်ပြထားပါသည်၊ဘယေရှုသည်၊မာရိနှင့်မာသ တို့၏ပူပန်သောကကိုမျှဝေခံစားခဲ့ပါသည်။ သူသည်လာဇရုကို ချစ်မြတ်နိုးခဲ့ သည်။ “အလွန်ညိုးငယ်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်ခြင်းရှိ၍”ဟူ၍ (ယောဟန် ၁၁း၃၃)၌ ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အပြစ်တရားကြောင့်သေခြင်းတရားသည် အမှန်တကယ် ပင်အုပ်စိုးခဲ့ပါသည်။ (Henry M. Morris, The Defender’s Study Bible, World Publishers, 1995 edition, p. 1154; note on John 11:35).
ဒေါက်တာ.ဂျေဗန်နုန်မက္ကီးပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ယေရှုသည် ယေရုဆလင်မြို့ကြည့် ယင်းနိုကြွေးခဲ့သည်ဆို၏။ ယေရုဆလင်မြို့ကို ကြည့်ပြီးငိုကြွေးသည့်တပြိုင်နက်၊ ကျွန်ုပ် တို့နှင့်မိတ်ဆွေတို့နေထိုင်သောမြို့များအတွက်လည်း သူသည် ကြည့်ယင်းငိုကြွေးခဲ့မည် ကိုအသေအချာပြောနိုင်ပါသည်။” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p.540, note on Hebrews 5:7).
“ယေရုဆလင်မြို့အနီးသို့ရောက်၍ ကြည့်မြင်လျှင်ငိုကြွေးတော်မူ၍၊ အချင်းမြို့၊ သင်၏ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရာတို့ကို သင်၏လက်ထက်ယခုကာ လ၌ပင် သင်သည်သိရလျှင်မင်္ဂလာရှိ၏၊ယ္ခုမူကား ထိုအရာတို့ကိုသင်၏မျက် စိရှေ့မှာမထင်ရှားစေခြင်းငှါဝှက်ထားလျှက်ရှိ၏၊အကြောင်းမူကား၊ ဥင့်ကို ကြည့်ရှုပြုစုတော်မူသော ကျေးဇူးကို သင်သည်မသိမမှတ်သောကြောင့်၊သင် ၏ရန်သူတို့သည် သင့်ပတ်လည်တွင်တပ်တည်၍ လေးမျက်နှာ၌ဝိုင်းရံလျှက် ချူပ်ထားပြီးလျှင် သင်၏ကိုယ်မှစ၍ သင်၏သားသမီးတို့ကို မြေနှင့်တညီ တည်းညှိသဖြင့် သင်၌ကျောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမျှထပ်ဆင့်၍ မကျန်ရစ်စေ ခြင်းငှါ၊ ပြုကြသောအချိန်ကာလရောက်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ (လုကာ ၁၉း၄၁-၄၄)။
အေဒီ၇၀တွင် ရောမဗိုလ်ချုပ်တိတုသည် ကရုဏာတော်ကင်းမဲ့စွာဖြင့် သားသမီးတို့ကို မြေနှင့်တညီတည်းညှိသဖြင့် ကျောက်တခုပေါ်တစ်ခုထပ်ဆင့်၍ မကျန်ရစ်အောင် ဖျက်ဆီးခြင်းကို ယေရှုသိမြင်တော်မူ၍ ငိုကြွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရုဆလင်မြို့ရှိ၊ သန့် ရှင်းလှပသော ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်သည် လုံး၀ပျက်စီးသွားမည်ကို ယေရှုသိမြင် ၍ငိုကြွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဆိုဘာတစ်ခုမျှ ကျန်ကြွင်းမည်မဟုတ်၊ ကျောက်တစ်ခုပြီး တစ်ခု၊ဖြိုချဖျက်ဆီးမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်လည်း ထိုအုတ်တံတိုင်းနားရပ်၍ လက်နှင့်ထိ တွေ့ခဲ့၏၊ ဝီးလ်လိန်းအုတ်တံတိုင်းနားမတ်တပ်ရပ်၍ ကျွန်ုပ်လည်းယေရှုငိုသကဲ့သို့ငို ကြွေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ လူဂျူးလူမျိုးတို့ရာစုနှစ်အဆက်ဆက် ညှင်းပန်းညှင်းဆဲ ခဲ့ခြင်းများကိုတွေးရင်း ကျွန်ုပ်ငိုကြွေးခဲ့ပါသည်။
အိုး၊ ယေရှုသည် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိမြို့၌ရှိသော မယုံကြည်သောသန်းပေါင်း မြောက်များစွာသော ဝိညာဉ်များအဖို့ငိုကြွေးနေမည်ဖြစ်သည်! သူသည်၊ ဝါရှင်တန်မြို့နှင့် လန်ဒန်မြို့၊ ပဲရီးစ်မြို့နှင့်ဘာလင်မြို့၊ ကလ်ကတ္တားနှင့်ပေကျင်းမြို့၊ ဂလားစကို့မြို့နှင့်ဆီးစ် ကနီမြို့၊မက္က်စီကိုမြို့တော်နှင့်ဆိုင်ဂိုဗီယန်းတီးယန်းမြို့နှင့်ရန်ကုန်မြို့တော်၊ ဂျာကာတာမြို့ နှင့်မော်စကိုမြို့-နှင့်ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးရှိမြို့ကြီး၊ မြို့ငယ်ရှိသမျှအဖို့ငိုကြွေးနေမည်! ဘုရားသခင်၏ ကြွေကွဲဝမ်းနည်းသောနှလုံးသားကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသား လည်းကြေကွဲဝမ်းနည်းတတ်ပါစေ!
ယေရှုဘုရား၏ စီးကျသောမျက်ရည်တော်များက ကျွန်ုပ်တို့အားဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းဝေငှဖို့ရန် တွန်းအားဖြစ်စေပါသည်။ ယေရှုဘုရား၏စီးကျသော မျက်ရည်တော် များကကျွန်ုပ်တို့အား ဘာသာစကားမြောက်များစွာဖြင့် ဒေသနာတော်ကိုပြန်ဆိုပြီးတတ် နိုင်သလောက် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ဝက်ဒ်ဆိုက်ဒ်တင်ရန်တွန်းအားပေးနေပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုလိုနီနယ်ချဲဖို့မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုကိုအယုံသွင်း နေခြင်းလည်းမဟုတ်ပါ! မဟုတ်ပါဘူး! ထိုတိုင်းနိုင်ငံဒေသ၌ရှိ အမှုဆောင်များနှင့်အတူ၊ နှလုံး သားကြွေကွဲသော ယေရှု၏နောက်လိုက်များပီပီ၊ သခင်၏မေတ္တာဂရုဏာတော်ကို ဝေငှာသက်သေခံရန်သာဖြစ်ပါသည်! အင်တာနက်ဝိဒ်ဆိုက်ဒ်ပေါ်တင်ထားသော ဤဒေ သနာတော်ကို ဖတ်ကြားသောသူအားလုံးတို့အား ထိုကဲ့သို့ပြောလိုပါသည်။
ယေရှု၏မျက်ရည်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့ပေါ်၌ ဧဝံဂေလိတရား ဟောကြားရန်တွန်းအားပေးနေပါသည်။ သခင်မိန့်တော်မူသည်ကား
“သခင်က၊ မြို့ပြင်လမ်းမ၊ခြံနားသို့သွားဦးလော့။ ငါ့အိမ်ကိုပြည့်စေခြင်းငါS၊ အနိုင်အထက်ခေါ်သွင်းလော့။ (လုကာ ၁၄း၂၃)။
၃။တတိယ၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ယေရှုငိုကြွေးခြင်း
ဤငိုကြွေးခြင်းသည် တတိယမြောက်ယေရှုငိုကြွေးခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းဖြစ် ၏။ ညဉ့်နက်အမှောက်ထဲ ယေရှုမျက်ရည်ကျလျှက် ငိုကြွေးခဲ့ရပါတကား! နုတ်ကပတ် တော်အရှင် ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအဖြစ်၌နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှကယ်တင်လွှတ် နိုင်တော်မူသောသူကို ကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆု တောင်းပဌာနာပြုသဖြင့်၊ ကြောက်ရွှံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)။
ယေရှုသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်အသေမခံမှီတည၊ ဂေသရှေမန်ဥယျဉ်တော်၌ အထီးကျန်ဆန်စွာ ဆုတောင်းတော်မူခဲ့၏။ ဂေသရှေမန်အမှောင်ထုည၌ ကယ်တင်ရှင် သည်ညိုးငယ်စွာခမည်းတော်ထံဆုတောင်းပဌနာပြုခဲ့သည်။ ဆုတောင်းတော်မူသည်ကား၊ “ကြီးစွာသောကြွးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆုတောင်းပဌနာပြုသဖြင့် ကြောက်ရွှံ့ ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)။ မည်သည့်အရာကိုကြောက်ရွှံ့ခဲ့သနည်? လက်ဝါးကားတိုင်ဆီသွားရဦးမည်ဖြစ်၍ ထိုနေ့ည၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ သေမည်ကိုစိုး ရိမ်၍ဖြစ်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ဒေါက်တာဂျွန်အာရ်ရိုက်စ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊ “ထိုည၌သေခြင်းခွက်ကိုရွေ့နိုင်လျှင်ရွေ့ပေးဖို့ ဆုတောင်းရာတွင်၊ မနက်ဖန်လက်ဝါးကား တိုင်၌ အသက်ရှင်ရန်အတွက် ထိုသို့ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်၏” (ရိုက်စ်အိုင်ဘီအိုင်ဒီ၊စာ မျက်နှာ၄၄၁) နာမည်ကျော်ဓမ္မဗေဒပညာရှင်၊ ဒေါက်တာဂျေအိုလစ်မာ၊ ဘာ့စ်ဝေလ်ပြော ကြားခဲ့သည်မှာ “(ယေရှု)ဂေသရှေမန်ဥယျဉ်မှ လွန်မြောက်ပြီး အလိုတော်အတိုင်းလက် ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ပြီးစီးစေရန် ထိုသို့ ဆုတောင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုပါသည်။ ဤရှင်း လင်းချက်သည်ဟေဗြဲ၅း၇၏ ဆိုလိုရင်းနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်လည်း ထိုရှင်းလင်းချက်သည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။” (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1971, part III, p.62).
ဒေါက်တာဘာ့စဝေလ်၊ ဒေါက်တာရိုက်စ်နှင့်သဘောတူညီသော၊ ဒေါက်တာမက္ကီး ပြောကြားရာတွင် “မိတ်ဆွေများသူသည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ အသက်မသေရမည်ကို ကြားသိရခဲ့ပြီဖြစ်သည်” (အိုင်ဘီအိုင်ဒီ)။
“ထိုခရစ်တော်သည် လူဇာတိအပြစ်၌နေစဉ်ကာလ၊ သေခြင်းမှကယ်လွှတ်နိုင် တော်မူသောသူကို ကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်း၊ မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့်ဆု တောင်းပဌနပြုသဖြင့် ကြောက်ရွှံ့ရာအမှု၌ ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” (ဟေဗြဲ ၅း၇)။
လောကီသားအပေါင်းတို့၏အပြစ်သည် ဂေသရှေမန်ဥယျဉ်၌ ယေရှုအပေါ်ပုံချ ထားပြီးဖြစ်၏။
“တပည့်တော်တို့နှင့်ကျောက်ခဲတစ်ပစ်လောက်ခွါသွား၍၊ ဒူးထောက်လျှင်၊ အ ဘအလိုတော်ရှိလျှင် ဤခွက်ကို အကျွန်ုပ်မှလွဲတော်မူပါ။ သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်းမဖြစ်ပါစေနှင့် ကိုယ်တော်အလိုတော်ရှိသည်အ တိုင်းဖြစ်ပါစေသော်ဟု ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန်သည် ထင်ရှားလာ၍ကိုယ်တော်ကို အားပေးရ၏။ ပြင်းစွာသောဝေဒနာကိုခံလျှက် အထူးသဖြင့်ကြိုးစား၍ ဆုတောင်းတော်မူ၏။ ချွေးထွက်တော်မူသည်ကား၊ မြေပေါ်မှာကျသောသွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်း။ (လုကာ ၂၂း၄၁-၄၄)။
လောကီသားတို့၏ အပြစ်အားလုံးစုံကို ဘုရားသခင်သည် ယေရှုအပေါ်ပုံချတော်မူသော အခါ၊ ယေရှုသည် ပြင်းထန်စွာသောဝေဒနာကို ခံစားတော်မူခဲ့သည်။ “ပြင်းစွာသောဝေဒ နာကိုခံလျှက်၊ အထူးသဖြင့် ကြိုးစား၍ဆုတောင်းတော်မူ၏၊ ချွေးထွက်တော်မူသည် ကားမြေပေါ်၌ကျသော၊ သွေးစက်ခဲကဲ့သို့ဖြစ်သတည်” (လုကာ၂၂း၄၄)၊ ဒေါက်တာမက္ကီး ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊”အကျွန်ုပ်တို့သခင်သည် လက်ဝါးကားတိုင်သို့ရောက်ခါနီးလေလေ၊ သေခြင်းမှလွှတ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းပြီးကားတိုင်ဆီသို့ အရောက်လှမ်းခဲ့ပါသည်” ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည့်အတိုင်း “ကြောက်ရွှံ့ရာအမှု၌ချမ်းသာရသည်ဖြစ်၍” (အိုင်ဘီအိုင်ဒီ) ယေရှု၏ဆုတောင်းသံကို အဖခမည်းတော်ဘုရားသခင်ကြားတော်မူသဖြင့် “ကြီးစွာသော ငိုကြွေးခြင်း” ညဉ့်နက်အမှောင်ဂေသရှေမန်၌ ငိုကြွေးခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်တမန်ကို စေလွှတ်ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်အဖို့အခအတွက် လက်ဝါးကားတိုင် ထက်ပေးဆပ်အသေခံဖို့ ကူညီမစရန်စေလွှတ်ခဲ့ပြီးအားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့ပါသည်။ ယောသပ် ဟတ်က၊ ယေရှုကေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ဆုတောင်းနေခြင်းကို ဓမ္မသီချင်းသီကုံးရေးသားခဲ့ ပါသည်။
(၁၇၁၂-၁၇၆၈၊ ယောသပ်ဟတ်သီကုံးသော “အဘယ်မျှကြီးမြတ်မေတ္တာ”)
ယေရှုသင့်ကို အဘယ်မျှလောက်ချစ်သည်ကို တွေးကြည့်ပါလေ! သင့်ဝမ်းနည်းခြင်းအ တွက်ယေရှု၏မျက်ရည်ကို တွေ့မြင်ခံစားကြည့်ပါ! အမြို့မြို့အနယ်နယ်တို့အဖို့၊ ယေရှုငို ကြွေးနေသည်ကို တွေ့မြင်ခံစားကြည့်ပါလေ! သင့်အပြစ်အဖို့ ကားတိုင်ထက်သို့အ ရောက်သွားနိုင်ဖို့၊ ဘုရားသခင်ထံအသနားခံခဲ့တယ်! “မျက်ရည်ကျခြင်းနှင့် ဆုတောင်း ပဌာနပြုသဖြင့်” ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဤအမှုအရာများက သင့်ကိုရွှေ့လျားမှုရှိစေပါ သလား? ယေရှု၏မျက်ရည်က သင့်အားရွှေ့လျားမှုမရှိစေနိုင်သည့်အရာကား၊ မည်သည့် အရာနည်း?အပြစ်များကသင့်အားမောက်မာစေပြီး ယေရှု၏မေတ္တာသင်မခံစားနိုင်ဖြစ်နေ ပါသလား? “လက်ဝါးကားတိုင်တော်ကြည့်၍ အံ့ဩဖွယ်ရာကျူး” ဒေါက်တာဝတ်ဒ်၏ ဓမ္မသီချင်းကို မှတ်မိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။
”လက်ဝါးကားတိုင်တော်ကြည့်၍ အံ့ဩဖွယ် ရာကျူး”)
ယေရှုသခင်ကို သင်ယုံကြည်လက်ခံဖို့သင့်အား ကျွန်ုပ်တောင်းဆိုလိုပါသည်! သခင်ထံတိုးဝင်ချဉ်ကပ်ပါ! ရှေးတော်၌ဒူးထောက်လိုက်ပါ! အသက်တာတခုလုံးဆက် ကပ်အပ်နှံထားလိုက်ပါ! “မေတ္တာတော်မြတ်အောက်မေ့သောအခါ၊ အသက်ဝိညာဉ်ဆက် ကပ်မှပေ”ဟူသောဒေါက်တာဝပ်တ်နှင့်အတူ ဓမ္မသံပြိုင်သီဆိုလိုက်ပါ။ ဘင်ဂျမင်ဘတ်ဒုန် သည်နှစ် ခြင်းတရားဟောဆရာတဦးဖြစ်၏။ “အပြစ်သားတို့၏ဝမ်းနည်းခြင်းကို ခရစ် တော်အောင်ပြီလော့” ဟူသောဓမ္မသီချင်းကို မရေးသားခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၊ထိုဆရာ ကိုသိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
(၁၇၁၇-၁၇၉၅၊ ဘင်ဂျမင်ဗက်ဒုန်းသီကုံးသော “အပြစ်ကိုခရစ်တော်အောင်
ပုံမှန်မဟုတ်သော ဘုရားသခင်၏ရွှေ့လျားမှု၊ နိုးကြားခြင်းအပြုအမှုနှစ်ခုကို ကျွန်ုပ် တွေ့ခဲ့ရသည်။ အချိန်ကာလဖြစ်စဉ်နှစ်ခုစလုံး၌ လူသားတို့သည်မျက်ရည်စီးကျလျှက် မိမိတို့၏အပြစ်များကို နောင်တသံဝေဂရရှိလျှက်ရှိကြ၏။ ယနေ့တရုတ်နိုင်ငံကိုကျွန်ုပ် တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ မှန်ကန်စွာ ဝိညာဉ်နိုးကြားလျှက်ရှိနေပါသည်။ “ကျွန်ုပ်တို့ဝမ်း နည်းခြင်းယေရှု၌တည် အပြစ်သည်မျက်ရည်အစဉ်ယိုစီးစေ” ယနေ့ည သင့်အပြစ်ကို သိနားလည်ပြီး နောင်တရပါ! သင့်အဖို့ငိုကြွေးနေသော ကယ်တင်ရှင်ထံသင်တိုး ဝင်ချဉ်း ကပ်ပါမည်လား! သခင်သည်သင့်ကို ကယ်တင်ပါမည်! သခင်သည်သင့်ကို ကယ်တင် ပါမည်! သခင်သည်သင့်ကို ယခုကယ်တင်ပါမည်!
သခင်သည် ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်တော်ထဲသို့ ကြွရောက်လာပြီး၊ သင့်အဖို့ငိုကြွေးဆု တောင်းပြီးချွေးစက်မှ သွေးစက်ခဲစီးကျသည့်တိုင် သင့်ကိုချစ်သောယေရှုကို သင်ယုံကြည် အားကိုးပါမည်လား? အို၊ ယခုပင်ယုံကြည့်လိုက်ပါ! ယေရှုသည် ဘယ်တော့အခါမှမ ပြောင်းလဲသော ယေရှုပင်ဖြစ်သည်! သင့်အားချစ်နေသည်ကို သိမြင်စဉ်းစားပါလေ! သင့် အားသခင်လက်ရုန်းတော်နှင့် သင့်အားချစ်၍စောင့်ရှောက်လျှက် သင့်ထံသို့ကြွလာနေ သည်! ယုံကြည်လိုက်စမ်းပါ၊ သင့်ယုံကြည်စဉ်းစားရာတွင် သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိ မည်ဖြစ်ပါသည်! သင့်၏အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ထာ၀ရအသက်ကို ပေးသနားတော်မူပါ မည်!
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် ဒေါက်တာခရိတန်အာယ်.ချန်မှ ရှင်လုကာ ၂၂း၃၉-၄၅ကို ဖတ်ကြားပေးပါသည်။
-တရားဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင် ခင်ကိတ်ဂရိဖက့်စ်မှ ဒေါက်တာဂျွန် အာရ်ရိုက်စ် ၁၈၉၅-၁၉၈၀ခုနှစ်၊ သီးကုံးသော”ယေရှုသင့်ကိုချစ်နေသည်” ဟူသောဓမ္မသီ ချင်းသီဆိုပေးပါသည်။
“မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ၍၊ လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူဖြစ်၏၊ ငြိုငြင်ခံရသူ၊ နာကြဉ်းခြင်းဝေဒနာနှင့်ကျွမ်းဝင်သူဖြစ်၏၊ သူတပါးမျက်နှာလွဲခြင်းကိုခံရ သောသူကဲ့သို့ဖြစ်၏၊ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံလျှက်ရှိ၍ ငါတို့သည်မရိုသေကြ (ဟေဗြဲ ၅း၇)။
၁။ ပထမ၊ လာဇရု၏သင်္ချိုင်း၌ ယေရှုငိုကြွေးခြင်း၊ ယောဟန် ၁၁း၃၃-၃၆၊ ရောမ ၁၂း၁၅၊ ကမ္ဘာ ၂၈း၁၆၊
၂။ ဒုတိယ၊ ယေရုဆလင်မြို့ကို ကြည့်မြင်လျှက်ယေရှုငိုကြွေးခြင်း၊ လုကာ ၁၉း၄၁-၄၄၊ ၁၄း၂၃၊
၃။ တတိယ၊ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်၌ ယေရှုငိုကြွေးခြင်း၊ ဟေဗြဲ ၅း၇၊ လုကာ ၂၂း၄၁-၄၄